नजिक न्युज | जागिर खान बाजुरा फर्किएकी सृष्टिलाई जनताले नगरपालिका उप–प्रमुख बनाइदिए
पछिल्लो समय हेर्दा राजनीतिमा युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छ। यो सकारात्मक पनि छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि युवाहरुको एकदम उल्लेखनिय सहभागिता भएको देख्न सकिन्छ। शिक्षित मान्छेहरु वडा सभापतिको रुपमा चुनावमा जाँदै छन्। क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रुपमा छनोट हुँदैछन्। म अहिले ३० वर्षकी भए तर म पनि अहिलेभन्दा १० वर्ष पहिलेदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए।
मेरो परिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिकै छ। मेरो बुवा स्वास्थकर्मी हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थकर्मीबाट राजीनामा दिएर सक्रिय रुपमा राजनीतिमा आएपछि उहाँ २०५४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा गाविस अध्यक्षमा चयन हुनुभएको थियो। दुःखद कुरा २०६० मा द्वन्द्धालमा बुवाको मृत्यु भयो। पारिवारिक रुपमा उहाँसँग हामीले धेरै समय बिताउन पाएनौं। सायद उहाँसँग यदि समय बिताउन पाएको भए केही राजनीति सिक्थे होला तर त्यो भएन।
बाजुरामा स्कुल बन्द भइसकेपछि ६/७ वर्षदेखि नै म होस्टेलमा बसे। बाल्यकाल मेरो नेपालगञ्जमा बित्यो। एसएलसी नेपालगञ्जबाट नै पास गरेपछि ‘प्लस टु’ काठमाडौंबाट गरे। स्नातक भने म पोखरा गएर गर्न पुगे। पोखरामा सिभिल इन्जिनियरिङ गरिरहँदा मेरो औपचारिक राजनीतिक यात्राको सुरुवात भएको हो।
म पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पुग्दा त्यहाँ बेथिती चरम बिन्दुमा थियो। आन्दोलन मात्रै हुने, पढाई नहुने, विद्यार्थी नेताले शुल्क नबुझाइदिने, आफू फेल भयो भने तालाबन्दी गरि दिने आदी। यस्ता कुरा प्रत्यक्ष रुपमा देखेपछि र एउटा गलत मान्छे राजनीतिमा गएपछि शक्ति दुरुपयोग कति हुँदोरहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो। त्यसपछि म राजनीतिमा जोडिन पुगे।
यसरी यी बेथितीको बारेमा राजनीति भन्दा बाहिर बसेर भन्दा त केही परिवर्तन गर्न आफ्नो आस्था भएको संगठनमा लागेर किन प्रयास नगर्ने भन्ने भयो। पछि कक्षा कमिटी हुँदै अनेरास्ववियू पोखरा विश्वविद्यालय महिला विभाग प्रमुख भएर काम पनि गरे र बेथितीको विरुद्धमा लडे।
म खासमा प्राविधिक क्षेत्रको मान्छे। मलाई राजनीति गर्छु भन्ने त थिएन तर घटनाक्रमले त्यस्तो बनायो। म आजीविकाका लागि सरकारी जागिर गर्ने भन्ने सोचाइमा थिए। लोकसेवा लड्ने भन्ने मेरो इच्छा थियो। आफूले सरकारी कार्यालयमा गएर परिवर्तन गर्ने भन्ने मनशाय थियो। त्यो वर्ष खुलेको लोक सेवा दिनको लागि इन्जिनियरिङको अन्तिम वर्षको नतिजा आउन केही समय लाग्ने भयो। अब त्यो एक वर्ष खालि समयमा के गर्ने त भन्ने सोच्दा मास्टर्सको तयारी गर्ने सोच आयो र तयारी कक्षा पनि लिँदै थिए।
त्यही समयमा बाजुरामा प्राविधिक कार्यालयमा इन्जिनियरिङको लागि जागीर खुल्यो। जागिर खाने भन्दापनि बाजुरामा केही समय बिताउने मेरो एउटा सपना जस्तो थियो। बाजुरा जन्मेको भए पनि म त्यहाँ एकदमै कम बसे। कहिलेकाँही पर्यटक जसरी वर्षमा एकपटक दशैंका गइन्थ्यो।
तर त्योपटक बस्ने मौका मिल्यो। त्यो मौका छोप्नुपर्छ भनेर तयारी कक्षा छाडे र जागिरका लागि निवेदन दिए। नाम पनि निस्क्यो। जागिर खाएको ठ्याक्कै २/३ महिना भएको थियो होला सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गरिदियो।
चुनावको घोषणापछि अब चुनावमा को उठ्छ ? को उप–प्रमुख हुन्छ ? को प्रमुख हुन्छ ? ठूलो जिज्ञासा मनमा आइरहेको थियो। त्यो बेलासम्म पनि म राजनीतिमा यसरी उप–प्रमुखको चुनाव लड्छु नै भन्ने लागेको थिएन।
सम्पूर्ण कुरामा पुरै जानकार नभएपनि म सक्छु र गरेपछि सकिन्छ भन्ने भावना पोखरा विश्व विद्यालयले सिकाएको थियो। त्यही आत्मविश्वासले उप–प्रमुखको उम्मेद्वारीसम्म पुगायो। सौभाग्यबस् मैले जिते दुर्भाग्यको कुरो नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुखले चुनाव हार्नुभयो।
यसबाट नयाँ पुस्तालाई अनुरोध गर्छु। राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ र पुरानो पुस्ताले अधिकार देलान् भनेर पर्खिनु हुँदैछ भने त्यो गलत हो। त्यसैले अधिकार हस्तक्षेप गरेर नै लिने हो। मेरो जितको कुरा गर्दा पार्टीले ४ वटा वडामा मात्रै जितेको थियो। ६ वटामा कांग्रेसको जित थियो र २ वटामा बराबर।
यति हुँदाहुँदै पनि मैले जित्नु पछाडिको कारण बाहिर पढीलेखी आएकी र इन्जिनियरिङ गरेकी भनेर भोट दिनुभयो। फेरि यो भनिरहँदा धेरैले बाउ बाजेको पार्टीको मान्छे भनेर पनि दिए होलान्। अझै पनि हाम्रो युवा पुस्तामा यो छ। म पनि बुवाको पार्टी भएर नै आएकी हुँ। पछि बुझ्दै गए त्यो अलग कुरा हो। तर वास्तविकता त्यहीँ हो।
व्यक्ति हेरेर भोट दिने मतदाता मेरो क्षेत्रमा मात्रै होइन सबै ठाउँमा छन्। फेरि मेरो बुवाको सहानुभूतिको भोट थोरै पाए हुँला। अनि एउटा केटी मान्छे जसले आँटेको छ, भोट दिउन त भनेर पनि केहीले हार्दिकताका साथ दिनुभयो जस्तो लाग्छ। यो कुरा त गर्वका साथ भन्छु हामी पश्चिमीहरुमा सद्भाव चाहिँ एकदम बढी छ। यी यावत् कारणले मैले उप–प्रमुखमा व्यक्तिगत भोट पाए। त्यसपछि मेरो राजनीतिक यात्रा चल्दैछ। कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन। तर पनि यात्रा जारी छ।
बिहिबार ३१, भदौ २०७८ ०८:०० मा प्रकाशित